Budata Ngwanrọ maka Windows
Google Chrome bu ihe nchọgharị intaneti di mfe, di mfe ma ama. Wụnye ihe nchọgharị weebụ nke Google Chrome, sọfụ ịntanetị ngwa ngwa na ntukwasi-obi. Google Chrome bu ihe nchọgharị intaneti a ma ama na ntanetị nke ejiri teknụzụ smart nke Google. Nhọrọ nke mbụ nke ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ịntanetị na ngwa ngwa na ntukwasi obi, enwere ike...
Firefox bụ ihe nchọgharị intaneti mepere emepe nke Mozilla mepụtara iji mee ka ndị ọrụ ịntanetị na-agagharị na weebụ ngwa ngwa na ngwa ngwa. Mozilla Firefox, nke a na-enye ndị ọrụ kpamkpam nefu, yana mmelite kachasị ọhụrụ; Ọ ghọọ ezigbo nkwenye megide ndị asọmpi ya dịka Google Chrome, Opera na Microsoft Edge nihe gbasara ọsọ, nchekwa na...
UC Browser, otu nime ihe nchọgharị kachasị ewu ewu maka ekwentị mkpanaaka, eruola kọmputa na ngwa Windows 8, mana oge a, ndị otu wepụtara ezigbo desktọọpụ desktọọpụ na-enye ihe nchọgharị ga-aga nke ọma na Windows 7 ndị ọrụ PC. Ihe nchọgharị ahụ, nke na-ekwusi ike banyere ịnye ahụmịhe dakọtara na ụdị mkpanaka ya; Ọ ejisie ike nyefee ibe...
Opera bụ ihe nchọgharị weebụ ọzọ nke na-achọ ịnye ndị ọrụ ahụmịhe ịntanetị kachasị ọsọ na kachasị elu ya na injin ya ọhụrụ, njikwa ọrụ na njirimara. Budata Opera Iwusi akụrụngwa ya na Chromium na Blink iji jigide ọnọdụ ya netiti ihe nchọgharị weebụ kachasị ewu ewu, Opera nwere atụmatụ nwere ike ịgbagha Chrome, Firefox na Internet...
Site na interface ya dị mfe ma dịkwa mma, Safari na-ewepụ gị nụzọ gị mgbe ị na-eme nchọgharị na ịntanetị na-enye gị ohere ịnweta ahụmịhe ntanetị kachasị ụtọ mgbe ị na-enwe nchebe. Ihe omume a, nke Apple nwere oke oke banyere ọsọ na nchekwa, na-aga nihu na-emepe emepe maka sistemụ arụmọrụ Windows. Niji ọtụtụ njirimara dịka arụmọrụ ọsọ...
Drawboard PDF bụ onye na-agụ PDF nefu, PDF mmezi mmemme maka ndị ọrụ kọmputa Windows 10. Ọ bụ ama nihi na ya eke pen ink, iche kensinammuo na mfe ọrụ interface, pen na aka ndakọrịta, na otu nnukwu nusoro nke markup na ederede review ngwaọrụ. Budata Drawboard PDF Iji mkpịsị odee ma ọ bụ mkpịsị akwụkwọ, ink dị nro na nke eke na-adị ka...
Site na Winamp, otu nime ndị egwuregwu mgbasa ozi kacha amasị na nke ejiri eme ihe nụwa, ị nwere ike ịkpọ ụdị faịlụ ọdịyo na vidiyo niile na -enweghị nsogbu ọ bụla. Noge nrụnye Winamp, ị nwere ohere ịhazi ọtụtụ ntọala metụtara mmemme ahụ dịka ọchịchọ gị siri dị. Ị nwere ike ịhazi ọtụtụ ntọala noge nrụnye, site nụdị ọdịyo na vidiyo...
Adobe Premiere Pro bụ mmemme mmezi vidiyo dị adị nechiche nke usoro iheomume emere iji mezie usoro mmepụta vidiyo. Nwere ike mbubata ma ọ bụ mbupụ niile di iche iche nke media formats nime usoro ihe omume. Mmemme, ebe ị nwere ike idezi ihe ruru 10,240 x 8,192 mkpebi, dọrọkwa uche ya na atụmatụ mmezi 3D ya. Budata Adobe Premiere Pro...
DAEMON Ngwaọrụ Lite bụ mmemme imepụta ihe eji eme ihe na - akwụghị ụgwọ ị nwere ike mepee faịlụ onyonyo na ISO, BIN, CUE extensions site na ịmepụta diski mebere. DAEMON Ngwaọrụ Lite bụ sọftụwia nwere ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na-enye ndị ọrụ ohere ngwa ngwa na ngwa ngwa ịmepụta diski mebere (draịva) na kọmpụta ha. Site nenyemaka nke...